पवित्र मन्दिरमा दक्षिणा माग्ने साधुसन्त हटाउन मिल्छ ? – Rapti Khabar
आफ्नो लेखन यात्रा सुरु भएको ढोरपाटन दैनिकमा लामो समयपछि यो लेख पुरानै स्तम्भ मार्फत पस्केको छु । कर्मथलो काठमाण्डौ भए पश्चात स्थानीय सरोकारका बिषयमा चाहेर पनि अपडेट हुन गाह्रो छ । तर विगतमा पाठकहरुले गर्नुभएको माया सदैव मार्गदर्शनको रुपमा लिने गरेको छु । लेखनलाई नै मूख्य पेशा बनाएको सन्दर्भमा लेख्नु मेरो बाध्यता पनि हो । र आलोचना सहनु, गालीगलौज खेप्नु, रिसीबी कमाउनु पनि मेरो बाध्यता हो ।
तर यो बाध्यतालाई म आफैले निम्ताएको हुँ । आजभोली प्रायः ठुलाबडाहरुको, सुकिला मुकिलाहरुको गुणगानका समाचारहरु देख्न, पढ्न पाईन्छ । पावर र पहुँच हुनेहरुको कर्तुतलाई उजागर गर्न समस्या छ । तिनैको रोटी र चिया खानु छ । यसो हुँदा गारो छ । तर मलाई कालिका मन्दिरमा दक्षिणाको अपेक्षा गरेर बस्ने ऋषी मन भएका साधुसन्त वा सजिलो भाषामा जोगीहरुको पक्षमा केही विचार राख्न मन लाग्यो । यो फगत विचारका लागि मात्र विचार प्रकट भएको हो । कसैले अनुसरण गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने हैन ।
म आफू हिन्दुबादी मनुस्मृती चिन्तनको आलोचक भैकन पनि खासगरी घरबार नै त्यागेर ऋषी मनका साथ लोभपाप, स्वार्थ भूलेर फिरन्ते जीवन बिताईरहेकाहरुलाई निकै आदार सत्कार गर्छु । एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रेम गर्छु । नभए मलाई जोगीहरुको बारेमा लेख्न किन खसखस हुनु ? वास्तवमा मनमा पाप नभएकाहरु नै जोगीहरुको पक्षमा लेख्न सक्छन् । हुनतः यो सबैका ठुलो परिघटना त हैन ।
तर मेरा लागि हो । किनभने घरबार त्यागेर मन्दिरको आसपासमा बस्ने असहायहरुको पनि आफ्नै महाभारत हुन्छ । मुनामदन हुन्छ । म तिनको संवेदनालाई पनि कम आँकलन गर्दिन । भारतको जम्मूकाश्मिर पहाडमा रहेको वैश्णदेवीको मन्दिरदेखि सुदुरपश्चिमको खप्तड क्षेत्रमा रहेको खप्तड बाबाको कुटीसम्म पुगेको छु । र ति पवित्रधामको आसपासमा बसेका ऋषीहरु, जोगी बाबाहरुलाई कम्तिमा २० रुपैयाँ दक्षिणा दिन भुलेको छैन । तर अब कालिका मन्दिरमा जोगीहरुलाई, बाबाहरुलाई दक्षिणा दिने परम्पराको समुल अन्त्य भएको छ । सदियौदेखी चलिआएको परम्परामाथि ब्रेक लागेको छ । आखिर किन ?
मन्दिरमा पुजा गर्नेहरुको दान गर्ने चाहना हुन्छ । खासगरी हिन्दुहरुको हरेक धर्मस्थलमा असहायहरु बसेका हुन्छन् । दान दक्षिणा गरेर पुण्य कमाउने हिन्दुबादी फिलोसफी नै हो । देश विदेशबाट आएका भक्तजनहरुले तिनलाई दुई चार रुपैयाँ सहयोग गर्छन्, दुई चार माना चामल दिन्छन् भने त्यो कुन आपत विपतको कुरा भयो ? शुक्रबारदेखि कालिका मन्दिर क्षेत्र माग्न बस्नेसहित माग्न रोकेको र यसबाट पर्ने असुबिधाप्रति केही मानिसहरुले क्षमा मागेका छन् ।
कसलाई किन मागेका हुन् क्षमा ? किन मागेका हुन् ? के तिमीहरु हरिद्वारका पिठाधिसहरु हुन् ? के उनीहरु महान् दार्शनिक हुन् ? के त्यो कालिका मन्दिरको परिसर तिनको निजी सम्पती हो ? अनि सिडीयो र प्रहरी प्रमुखको काम जता–जता बाहुन त्यता–त्यता स्वाह भन्दै हिँड्ने मात्रै हो ?
मानव सेवा आश्रम परिवारको जो सहयोगी कुरा छ, तिनको क्षेत्रअधिकार के हो । हो मानव सेवा गर्ने होला । ठिक छ, तर तिनले जोगीको सेवा गर्नुपर्दैन ।
ऋषीमनहरुको सेवा धार्मिक स्थलहरुले गर्ने ऐतिहाँसिक प्रचलन हो । उनीहरुले दुःख पाएका सहाराबिहीनहरुलाई सेवा दिन सक्छन् । तर मन्दिरको शोभा घट्यो, फोहोर भयो, हल्लाखल्ला भयो, भक्तजनलाई शान्त वातावरण भएन जस्ता मित्था भावनाहरुमा बहकिएर जोगी तथा साधुसन्तहरुको ब्यवस्थापन आवश्यक छैन । साधुसन्तहरु मन्दिर आसपास दक्षिणाको अपेÞक्षा गरेर बस्ने ऐतिहासिक प्रचलन हो । यो प्रचलन जारी रहनुपर्छ ।
ढोर पार्टन न्युजबाट साभार